Smart Power Myanmar စီမံကိန်းကို ကန်ဒေါ်လာ ၉ သိန်းကျော် အသုံးပြုဆောင်ရွက်မည်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် Pact Myanmar အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ Smart Power Myanmar စီမံကိန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ သိန်းကျော် အသုံးပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဌာနထံမှသိရသည်။
ယခင်နှစ်ထက် လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၆၀ ကျော်ဖိုး ပိုမိုတင်ပို့နိုင်
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ပြည်ပတင်ပို့မှုအနေနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့အထိ တင်ပို့မှုမှာ ယခင်နှစ်ကာလတူ တင်ပို့မှုပမာဏထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၆၀ ကျော်ဖိုး ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
မျိုးငါးနှင့် သားပေါက်များဖြန့်ဖြူးရန် ကျပ်သန်း ၆၀ဝ၀ အသုံးပြုမည်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက မေလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဆောင်ရွက်မည့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် မျိုးငါးနှင့်သားပေါက်များဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ငွေကျပ်သန်း ၆၀ဝ၀ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
စင်ကာပူငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (Ascent Capital) က မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းကို အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Frontiir Pte. Ltd. တွင် ရှယ်ယာအနည်းစုအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း Ascent Capital ထံမှ သိရသည်။
ကန်ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းအသုံးပြု၍ စွမ်းအားမြင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်မည့် စွမ်းအားမြင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်းကို Video Conferencing ပြုလုပ်၍ မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အစီအစဉ်ကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရသည်။
ဖရဲ၊ သခွားစိုက် တောင်သူအများစု အရှုံးပေါ်
ယခုနှစ်တွင် ဖရဲ၊ သခွားမွှေး စိုက်ပျိုးသည့် တောင်သူအများစုမှာ ခန့်မှန်းခြေ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အရှုံးပေါ်ကြောင်း ယင်းတောင်သူများထံမှ သိရသည်။
JICA က Covid-19 ကာလအတွင်း ငါးသားပေါက်နှင့်ငါးအစာများ ကူညီပံ့ပိုးမည်
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) က Covid-19 ကာလအတွင်း ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ငါးသားပေါက်နှင့်ငါးအစာများ ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs ကမ္ဘောဇဘဏ်က ထုတ်ချေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) အတွက် COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs ချေးငွေများ ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ်ထံမှ သိရသည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၏ လုပ်ငန်းစဉ်လေးမျိုးအတွက် အစိုးရက ဘီလီယံ ၆၀ ခန့် ထောက်ပံ့ပေးမည်
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၏ လုပ်ငန်းစဉ်လေးမျိုးအတွက် အစိုးရက ဘီလီယံ ၆၀ ခန့် ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူက ပြောကြားသည်။